Akanditi arikutoda kusvirwa nekuti nguva yainge yareba | Nhau Dzevakuru
Home Nhau DzeBonde Akanditi arikutoda kusvirwa nekuti nguva yainge yareba
Akanditi arikutoda kusvirwa nekuti nguva yainge yareba
Ndainge ndakugara muCape Town ndichishanda ikoko zvekuti ndaitonge ndava ne6 years ndabuda muZim.Munongoziva kurarama kwemazimbo muma Restaurant, pabasa pangu ndini ndaiyita zveku hire vanhu saka you can imagine my surprise ndichiwona CV ye ex yangu achitsvaga basa. Ndakambofunga kuti pamwe kufanana kwemazita ndokubva ndati rega ndifone ndiwone kuti ndiye here. Ndakamufonera ndikati awuye ku interview magwana acho ndokuswera husiku hwese ndichizvibvunza kuti ndiye here but ndakangoti kwasara a few hours kuti ndizive.
Ndakayenda kubasa as usual ndokumirira my 10 o’clock appointment apa ndiyo yaiva interview ye ex yangu, akasvika ndikamuona achiri pa reception chaipo ndokubva anzi ambogara akamirira 10 kuti dzikwane. Akapinda muoffice mangu akatarisa pasi asi paakasimudza musoro ndokundiwona aka screamer zvekuti receptionist akauya kuzobvunza kuti kwakanaka here. Akayita kundimbundira nerimwe zi hug ndichibva ndaita kunyura mumazamu ake ainge akura kuita kunge mabhora e soccer. Kubva time yatakadanana this was the closest yandainge ndayita nekubata mazamu ake, ndaitya kumubata bata time iyoyo.
Ndisati ndaita interview ndainge ndakutoda kutoyenda naye kumba nekuti kukura kwake ainge atowedzera kunaka apa kukura kwainge kwayita mazamu ake ayimisa mboro yekungomatarisa. Ndakazoita interview ndakamisa mboro and semunhu akanga asina kumbobata ex yake kudhara ndainge ndakungoda kuona kuti did i miss anything pamakore atainge tisina kuwonana.
Ndakamupa basa ndokubva adzoka magwana kutraining but vanhu vainge vakutoziva kuti ndapa basa ex yangu since receptionist ainge akawona zi hug randakapihwa. Ndaizama kuti ndisawonane stereki pabasa even though kamwe kamoyo kaida, mumwe musi kwaiva busy zvekuti most waiters vainge vasina nguva yekushanda ne trainer and this forced me kuti ndishande pafloor as a waiter so ex yangu akaibva ayita shadow yangu that day. Takashanda zvakanaka kusvikira shift yemanheru yapera, she came kuOffice kwangu zvikanzi I can’t thank you enough for all you have done for me.
Ndakangoti I am sure you could have done the same, apa chaaifarira kunyanya zuva iri was ese maTips atakaita I left her to keep. Mwana akafara kani zvikanzi one day I will pay you back, ndakabva ndangoti how iwe wane murume, at this point ndaifunga kuti ndirikutaurira nechimumoyo izvo ndainge ndatodeedzeresa zvekuti akazvinzwa, guess ndainge ndaneta nebasa. Mwana akatanga kuseka achiti I was married but takarambana 2 years ago thats why ndakawuya kuno kuzoshandira mwana wangu.
Kamwe kapfungwa kaimunzwira tsitsi asi kamwe kaifara kuti this is my time now, kubva musi iwoyo ndainge ndakungoita nice making sure I help in any way I can, mumwe musi I even offered kumuyendesa kumba ko ini ndainge ndiri management and ndaifamba ne Toyota Fortuner yebasa but I was paying it off kuti ive yangu. Until this day ayinge asati ambowona kuti ndinofamba neyi because inini I stayed very close to work saka some times ndaitofamba coming to work. Musi uyu ndaida kuwona where she stays kuti ndipote ndichinomuwona or vice versa.
Same day ratakabuda tese ndichimuperedza handina kuziva kuti two years dzese munhu ainge asati ambosvirwa, aigara a good 30 to 40 mins drive but inini nekuda kuita catch up ndaifamba hangu at slowly. Takatanga tichitaura hedu and she was a straight forward person ndokubva ati ndiregererewo nezvandakuda kuyita, ndisati ndabvunza kuti chii ndakanzwa munhu akuvhura zip yebhurugwa rangu, akaburitsa mboro yainge yakamira kare good thing my car was automatic, ndakangosimudza ruoko ndikamusiya. Mwana akatanga kusveta mboro yangu slowly achitambisa kurimi rwake pamusoro wemboro yangu ndokubva ndatanga kunzwa huronyo huchiwungana iiii ndakatunda zvine pressure.
Ndakabva ndamuti sha you have to finish zvawatanga zvikanzi aah sha I know but inini ndini ndirikutoda kusvirwa more it’s been two years. Ndakamuti can we go kwako or kwangu zvikanzi kwake anogara ne roommate, ndakarova U-turn ndakananga kumba kwangu. Ndainge ndine ka nice Loft just for me kainge kane bedroom upstairs, ndakati ndichingovhura door munhu akabva atanga kundikisa ndikanzwa ropa richimhanya kumboro ichibva yamira futi, mwana aigona kukisa mhani nekuyamwa mboro.
Takawira pamu couch tichiita kudyanana muromo ndikawona munhu ayita kupfugama ndokutanga kuyamwa mboro futi asi this time ndakamumisa ndokubva ndamusimudza ndokuyenda naye upstairs, ndakatanga kumutambisa beche rake apa rainge rakaita kufuta uchiwona kaspot kakaita kumira, zviya zvekuratidza kuti zemo rainge ravapo zveshuwa. Takatamba husiku hwese then patakazosvirana guys even after that long tisina takasvirana nyoro kusvika kuseni luckily we were both on the night shift again saka takaswera takarara zuva kusvikira tayenda kubasa. Ndakazomuperekedza kumba after work and these days tinoti 2 days anoyenda kwake 5 days kwangu.
kunakirwa ne ex yangu
Previous articleNdakawona beche rakaitwa kuyanikwa apa rakanunira mukati
Next articleNdakasvirwa nevasikana two kumaAvenues kusvikira vatunda vese